Uri kuwana system kukanganisa paunenge uchishandisa Windows 10? Ane Windows 10 kunonoka? Uri kutora mafaera akashatiswa kukanganisa kana faira irikushaikwa kukanganisa mushure mekutangisa kupinda mukati Windows 10? Muchirongwa ichi, tichaona maitiro ekugadzirisa Windows 10 system mafaera.
Faira rinogona kunge rakashatiswa nekuda kwezvikonzero zvakawanda. Virus uye yakaipa software yechitatu-bato inowanzo kuve chikonzero kuseri kweakaora mashandiro efaira faira. Mafaira anokanganiswawo paunoyedza kuashandura. Nzira yakanakisa yekugadzirisa faira ndeyokuigadzirisa.
Windows 10 inopa maturusi ekutarisa uye kugadzirisa akaora mafaira mafaira. Chikamu chakanakisa ndechekuti haufanire kuisa chechitatu-bato software kana kuda download Windows 10 ISO. Unogona kushandisa rairo yekumhanyisa kumhanyisa zvishandiso uye otomatiki kugadzirisa mafaira akaora.
Kuita iyi mirairo hakuzoite chero shanduko yako wega mafaira akadai semagwaro uye mifananidzo yakachengetwa paPC yako. Zvakare, iyi mirairo haizoite chero shanduko kune yako Windows 10 zvirongwa.
Iyo yekugadzirisa faira chishandiso haina kungobatsira chete kana iwe uchinge uchinge uchinge wawana faira rakashatiswa kana faira isipo kukanganisa asi inogona zvakare kukubatsira iwe kugadzirisa zvakajairika Windows 10 nyaya uye zvikanganiso.
Pedzisa zvakapihwa pazasi madhairekitori ekugadzirisa Windows 10 system mafaera.
Kugadzirisa system mafaira mu Windows 10
INOKOSHA: Izvo zvakakosha kuti uite mirairo miviri yakataurwa pazasi. Ndapota usamira paChitatu 2.
Step 1: Vhura yakakwidziridzwa Command Prompt. Kuti uite izvozvo, nyora CMD muKutanga / Taskbar yekutsvaga bhokisi, tinya-kurudyi pane Command Prompt kupinda mumhedzisiro yekutsvaga uye wobva wadzvanya Mhanya semutungamiri sarudzo ku Open Open Prompt as administrator.
Dzvanya Hongu bhatani kana iwe ukaona iyo Yekushandisa Akaunti Kudzora dialog.
Step 2: Mune iyo Yakakwidziridzwa Command Prompt, nyora unotevera kuraira uye tinya Enter Enter.
Windows 10 zvinogona kutora maminetsi akati kuti apedze oparesheni. Iwe unowana "Kudzosera oparesheni kupedzwa zvinobudirira" meseji kana wapedza.
Zvekare, uyu murairo unotora zvakare maminetsi akati kuti apedze kushanda. Kana mafaira akaora akawanikwa, iwo murairo unozogadzirisa otomatiki.
Tip: Kana kugadzirisa mafaera ehurongwa aisakwanisa kugadzirisa nyaya yacho, unogona kuedza kudzorera Windows 10 kusvika kune imwe yapfuura.
Maitiro Ekugadzirisa rakashatiswa reBhuku reBasa
Maitiro Ekugadzirisa Akaora Vhidhiyo Yemahara?